Lenovo K3 Fanamarihana fanamarihana | Androidsis
Famerenana ny Lenovo K3 Note, Octa Core 64-bit manontolo ary RAM 2 Gb amin'ny vidiny 135 Euros fotsiny
Francisco Ruiz | | Lenovo, hevitra
Androany aho te-hanolotra anao ny famerenana feno ny iray amin'ireo terminal tsara indrindra mifandraika amin'ny sandan'ny vola izay nireharehanay namakafaka tao amin'ny Androidsis.com. Ny terminal dia tsy iza fa ny Lenovo K3 Fanamarihana, terminal izay avy eto Androidsis dia efa nampahafantatra anao izahay taloha ary manana izany izahay hividy izany amin'ny farany 135 Euros fotsiny.
Tsy misy isalasalana, ity Lenovo K3 TsiaIzy io dia tonga safidy tsara kalitao amin'ny elanelam-potoana Android, elanelam-potoana izay, noho ny pitsopitsony teknika, dia azo ampidirina ao amin'ny Android avo lenta satria amin'ny fitsapana toy ny malaza AnTuTu Benchmark, ity terminal manaitra miaraka amin'i Android 5.0 mahazoa ny isa tsy azo dinihina 45334 mijoro ambonin'ny terminal toy ny Samsung Galaxy S5, LG G4 na saika mifanila amin'ireo terminal toa ny Samsung Galaxy Note 4 na ny Meizu MX4 tenany ihany.
1 Lenovo K3 Fanamarihana ara-teknika
2 Ny tsara indrindra amin'ny Lenovo K3 Note
3 Ny ratsy indrindra amin'ny Note Lenovo K3
5 Gallery Gallery
Lenovo K3 Fanamarihana ara-teknika
Famaritana Lenovo K3 Note
modely K3 Fanamarihana K50-t5
Operating System Android 5.0 azo havaozina amin'ny Android 5.1
efijery IPS 5'5 "miaraka amina vahaolana FullHD 1920 x 1080 teboka ary sosona fanaingoana VibeUI
processeur Mediatek MTK 6752 Octa Core ao amin'ny teknolojia 1 Ghz sy 7-bit
Fitahirizana anatiny 16 Gb tsy misy fizarana saika maimaimpoana 12 Gb aorian'ny rafitra ary miaraka amin'ny fanohanan'ny microSD
Fakan-tsary aloha 5 Mpx miaraka amina hatsaran-tarehin'ny feo ary mpitsongo maso
Fakan-tsary Rear 13 Megapixel misy sensor FlasLED roa sy Exmor CMOS miaraka amina aperture 2.0
Conectividad 2G-3G-4G-DualSIM-Bluetooth 4.0-GPS-aGPS sy Radio FM
Endri-javatra miavaka Ultra Battery Saver - Screen Screen -Wide Touch - Smart Standby - Efitra Efijery - Scene Smart - Snap Snap
lafiny 72'6 x 152'6 x 7'99 mm
lanja Gramin'ny 150
vidiny 135'69 Euros miaraka amin'ny fihenam-bidy 37%
Ny tsara indrindra amin'ny Lenovo K3 Note
Ny tsara indrindra azontsika resahina Lenovo K3 Fanamarihana, tsy isalasalana fa ny vidin'ny fivarotana tsy mampino satria ho an'ny irery ihany 135 euros hanana terminal avy amina marika fantatry ny rehetra amin'ny anarana hoe Lenovo isika miaraka amina antoka ara-kalitao tsy azo lavina sy ny fepetra arahana ara-teknika izay azo heverina ho terminal Android avo lenta.
Etsy ankilany, ny iray amin'ireo zavatra tiako indrindra momba an'ity Lenovo K3 Note ity dia ny vondrom-piarahamonina Android goavambe ao ambadik'ity terminal ity, izay hahafahantsika roa Root Lenovo K3 Mariho ny fomba fametrahana TWRP Recovery for mahay mamelatra Roms masaka ary amin'io fomba io, ohatra hoe afaka manavao azy amin'ny Android 5.1 ny alalan ' Rom masaka miorina amin'ny rom ofisialy farany avy amin'ny Lenovo mitahiry na mahazo fahazoana miasa vaovao aza. Ity farany, na ny TWRP Recovery Rooting sy ny rafitra fametrahana ary ny fanavaozana ny Android 5.1 mihitsy, dia hasehoko anao amin'ny lesona ho avy izay efa nomaniko.
Raha ny momba ny tsara indrindra azontsika jerena amin'ity Note Lenovo K3 ity dia azontsika fintino amin'ireto teboka manaraka ireto:
Sarimihetsika IPS FullHD mahavariana.
Mpandrindra valo ambiny haingam-pandeha miaraka amin'ny haitao 64-bit.
GPU mihoatra ny ampy hampihetsika ny ankamaroan'ny lalao Android.
Fanohanana ny karatra SD.
Kalitaon'ny fakantsary ivelany, na ny fakantsary anoloana na aoriana.
Ny kalitaon'ny fakantsary azo ekena ao an-trano amin'ny hazavana ambany noho ny FlashLED avo roa heny.
Azo atao ny mamaka azy io ary mametraka ny fanarenana TWRP novaina.
Fanampiny fanampiny maro no nampiana.
Batter 3000 mAh azo esorina izay mamela antsika hanana fizakan-tena manodidina ny 18/20 ora amin'ny fampiasana efijery manodidina ny 4 ora.
Ny ratsy indrindra amin'ny Note Lenovo K3
Ny ratsy indrindra tsy misy fisalasalana momba izany Lenovo K3 Fanamarihana, na dia misy vahaolana mora aza amin'ny alàlan'ny fametrahana APK tsotra na fandefasana Lenovo Rom ofisialy miorina amin'ny build 1526, dia tsy isalasalana fa ny heriny ambany. Hery malemy izaitsizy, farafaharatsiny izay hitako niaraka tamin'ny terminal vaovao nivoaka avy tao anaty boaty, na dia araka ny nolazaiko aza, hampianariko ianao hamaha izany amin'ny alàlan'ny fananganana ny terminal, fametrahana TWRP ary fanavaozana ny Android 5.1 ofisialy amin'ny alàlan'ny Rom nahandro sy namboarina ho faran'izay betsaka ho an'ity Lenovo K3 Note ity.
Fomba fiasa Lenovo tsy manam-paharoa
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Lenovo » Famerenana ny Lenovo K3 Note, Octa Core 64-bit manontolo ary RAM 2 Gb amin'ny vidiny 135 Euros fotsiny
82 hevitra, avelao ny anao
Ny lesoka hitako ao amin'ny Lenovo dia ny sosona fanaingoana azy, ratsy tarehy izany.
Vahaolana mora araky ny voalaza ao amin'ny famerenana horonan-tsary, miaraka amina fametrahana tsotra mpandefa Android dia manana vahaolana mora ianao ary manana fantsona tsara ho an'ny kely noho ny vidin'ny Moto E 2015, ohatra.
Efa nanandrana nametraka launcher ve ianao? Ananako izany ary efa nanandrana nametraka roa aho ary manome ahy hadisoana foana izany rehefa manandrana manamboatra widget ...
CARLOS DELFINO dia hoy izy:
HELLO FRANCISCO MANANA LENOVO K3 Mividy azy any Chine aho ary divay amin'ny teny espaniola nefa nangataka famoahana vaovao izy dia nataoko izany ary napetrany tao CHINO daholo izy ireo. INONA no azoko atao
Valio amin'i CARLOS DELFINO
Wiston Gonzalez Lesscal dia hoy izy:
Salama manao ahoana ny fahasalamanao. Toa smartphone finday tena manintona ahy io, fa ny fanontaniako dia hoe raha entiko eto amin'ny fireneko, Ekoatera, ho afaka maimaimpoana ve izany hiasa amin'ny mpandraharaha finday rehetra? Ampio aho amin'ity ahiahy ity.
Valiny tamin'i Wiston Gonzalez Menoscal
Maimaimpoana tanteraka hampiasaina na dia amin'ireo mpandraharaha roa samihafa aza.
Kasio dia hoy izy:
Moa ve mitondra ny tarika LTE misy 800?
Mamaly an'i Kasio
playchapas4 dia hoy izy:
Salama, naharitra hafiriana ianao vao nahazo findainao?
Valiny amin'ny playchapas4
Ho an'ny fandefasana ankapobeny, izany hoe, tsy misy sarany fandefasana na fomba amam-panao eo amin'ny 15 na 16 andro. Mandany 5 na 6 andro eo ho eo ny fandefasana DHL na GLS na dia tsy maintsy aloa aza ny saram-pandefasana sy ny haba.
Gustavo Vicheti dia hoy izy:
Salama Francisco: manana lenovo k3 aho fa niaraka tamin'ny boky torolàlana ho an'ny mpampiasa amin'ny teny sinoa. Aiza no ahazoako iray amin'ny Espaniola?
Valiny tamin'i Gustavo Vicheti
jamsya dia hoy izy:
Salama maraina. Izaho dia nitady finday tsara tamin'ny vidiny lafo nandritra ny fotoana kelikely ary ny tena marina dia ny fahitana ny famerenanao ity Lenovo ity dia nanaitra ahy be tamin'ny lafiny roa. Saingy tsy manana traikefa firy amin'ity karazana fiantsenana an-tserasera ity aho. Azo itokisana ve ny pejy fividianana anao etsy ambony ao amin'ilay lahatsoratra, Everbuying? Misaotra betsaka ary arahaba.
Mamaly an'i jamsya
Diego alvarado dia hoy izy:
amin'ny Linio dia amin'ny vidiny mirary ...
Valiny tamin'i Diego Alvarado
Salama Francisco Ruiz, fanontaniana iray, raha mampiasa ny fandefasana entana mahazatra 15 andro ianao, dia tsy mandoa ladoany?
Amin'ny ankapobeny, matetika izy io dia tsy tazonina amin'ny fomba amam-panao, na dia misy aza ny maningana manamafy ny lalàna.
Luciano dia hoy izy:
Salama, milamina ny telefaona miaraka amin'ireo andalana ao Arzantina
Iveth amador dia hoy izy:
Miarahaba anao, vao nividy finday avo lenta an'ity modely ity aho, hitako fa rehefa manova ny fiteny amin'ny teny Espaniôla aho, raha te hanova ny endri-tsoratra dia mbola voatanisa amin'ny teny sinoa ny endritsoratra: / ary misy ny menus sasany miseho amin'ny anglisy na espaniola. Ara-dalàna izany? Hiezaka ny hanao ny fomba nolazainao aho mba hanatsarana izany, azo atao ve ny mamaha ireo olana ireo amin'ny fampiharana ireo vahaolana zarainao? Misaotra
Mamaly an'i Iveth amador
Salama Francisco, manana fanontaniana amin'ity terminal ity aho ary izany dia satria maro amin'ireo mpampiasa ny forum sim finday roa no nitatitra olana tamin'ny fikitihana taorian'ny namonoana ny rômanina xancin, ary na ny sasany aza maty tsy akory ny fikasihan-tanana, ary araka ny hitako tao amin'ny iray amin'ireo horonan-tsary, mampiasa iray amin'ireo romana ianao, tiako ho fantatra ny zavatra niainanao tamin'ny finday. Misaotra sy arahaba indrindra.
Tsy misy karazana olana namana, mihoatra izany, isaky ny mandeha tsara kokoa amin'ireo Roms Xancin ireo izy.
Salama Daniel, tiako ho fantatra raha nahavita ny fiteny ianao, satria nividy telefaona aho ary nahazo zavatra tamin'ny anglisy sy sinoa na dia teny espaniola aza ny fiteny, raha izany ary tsy mampaninona anao ny mifandray amiko, ity ny mailako: mario.mendoza.info2@gmail.com
Salama maraina Francisco, vaovao aho amin'ireo forum ireo ary tiako ho fantatra raha miasa miaraka amin'ireo tarika manaraka eto amin'ny Repoblika Dominikanina ity Lenovo ity:
TENA TSARA NY FAMERENANA.
Salama Francisco, fangatahana iray; Ao amin'ny K3 Note-ko ny mpilalao horonan-tsary iray tsy tonga amin'ny alàlan'ny default, mety ho izany?
Ahoana no fomba hamahako azy? Gs.
famindrampo dia hoy izy:
Miaina lehilahy Cali Colombia aho, mila ny fonony miaro ahy ahafahako mahazo izany any amin'ny fireneko
Valiny tamin'i Clemencia
Chiara dia hoy izy:
Salama Francisco, manana fanontaniana aho, tiako ho fantatra raha manana fiteny Espaniôla (Arzantina) ny telefaona finday k3 satria novakiako fa tsy nanana ilay izy na niasa tamin'ny ampahany tamin'ny Espaniôla fotsiny.
Valiny tamin'i Chiara
Any dia hoy izy:
Salama Francisco. Ahoana no hividianako raha tsy mandany vola sy mandany vola amin'ny pejy inona aho? Mety tsara ve izany any Arzantina?
Nividy azy tamin'ny aliexpress aho fa tsy voavonjy amin'ny fandoavan-ketra arzantina !! Toy izany koa, ity tel in arg ity dia mitentina maherin'ny 15.000 $ ho an'ny aliexpress, mamela $ 3.000 miaraka amin'ny fandaniana rehetra.
Gustavo.Arg dia hoy izy:
Nividy azy tamin'ny aliexpress aho fa tsy voavonjy amin'ny fandoavan-ketra any Arzantina ianao !! Toy izany koa, ity telefaona any arg ity dia mitentina mihoatra ny $ 15.000, ho an'ny aliexpress dia mitentina $ 3.000 amin'ny fandaniana rehetra
Valiny tamin'i Gustavo.Arg
Alan Derudi dia hoy izy:
Manao ahoana ianao? Gustavo, nandidy azy io tamin'ny Deal Extreme aho, azonao atao ve ny milaza amiko fa nangataka anao tany amin'ny ladoany izy ireo mba hanala azy? tsy maintsy nankany Ezeiza ve ianao? Slds!
Valiny tamin'i Alan Derudi
Salama, azonao vidiana ao amin'ny magazay ara-batana any Seville ve izany? Ary zavatra iray hafa, ilaiko izy handraisana feo tsara, satria izaho dia trombonist ary mila manoratra ny tenako ho an'ny fitsapana ary toy izany, mila ny feo tsy ho voky, hanana olana amin'ity finday ity ve aho?
Alberto, manontany anao aho. Miasa tsara ho anao ny ekipa any Arzantina… ??? Ataoko ho an'ny tarika !!!
Ny finday avo lenta tsara indrindra mifandraika amin'ny kalitaon'ny vidiny, aorian'ny fametrahana ny xancin ROM dia tsy mangataka na inona na inona avy amin'ny terminal avo lenta, atolotra amin'ny 100, mila manova ny ROM Lenovo fotsiny ianao
xcelestex dia hoy izy:
Mieritreritra ny hanova ny rom aho araka ny nolazainao, fa inona ny tombony azo avy amiko? jerena
Mamaly an'i xcelestex
Alessandro dia hoy izy:
Salama, eto ry zareo milaza fa amidiny 135 euro fa tsy hitako hoe aiza ny safidy hividianana azy, tsy misy fandefasana ve io vidiny io?
Valio i Alessandro
Efa hitako ny rohy hividianana azy, eo akaikinao aiza ny fividianana?
mandefa vazaha eran'izao tontolo izao ve izy ireo?
Ny fivarotana dia amin'ny alàlan'ny fivarotana an-tserasera manokana izay manome ny antoka rehetra ary mazava ho azy fa mandefa izany any amin'ny faritra rehetra amin'izao tontolo izao izy ireo. http://www.everbuying.net/product895278.html
Salama. Nividy ny finday tamin'ny aliexpress aho ary manana ny olana fa tsy afaka mametraka ny playstore ho anao aho. Mametraka izy fa rehefa te hanokatra azy aho dia mikipy ary mikatona.
Afaka manome tanana ahy ve ny olona sasany? MISAOTRA
Wiston dia hoy izy:
Saingy ny Play Store dia tsy tonga amin'ny alàlan'ny tsindry napetraka ao amin'ny orinasa? Enga anie miaraka amin'ilay fanavaozana izay noresahin'i Lenovo tamin'ny Android 6 Marshmallow izay vao mainka mihatsara ...
Valiny tamin'i Wiston
Telefaona mahatsiravina, ratsy daholo izay maro loko, marary amin'ny dokam-barotra aho, viriosy, banga sinoa, mamela ny telefaona amin'ny alina ary mahita azy amin'ny maraina amin'ny alàlan'ny famelana azy sy amin'ny fametrahana apetraka, izay miverina indray rehefa tsapanao toy izany, ary manana rindran-damina / viriosy marobe izay tsy azo esorina izy, fividianana tena ratsy ary vita.
Salama, nividy an'ity telefaona ity aho fa ny toerana ipetrahako any dia 2G ihany ary amin'ny toerana vitsy dia vitsy ny 3G ka noho izany tsy manana signal mihitsy aho. Na iza na iza mahalala ny fomba fanaovako mba hananana fambara.
Luis tsy maintsy havaozinao, miaraka amin'ny fanavaozana ny telefaona tonga lafatra ary tsy misy dokam-barotra sinoa, ity telefaona ity dia hamidy any Chine, novidinao tany amin'ny magazay sinoa izany, mitady vaovao, mora ny manavao azy sy manova ROM.
Fransisco Te hividy iray ho an'ny sakaizako aho, ekena io fakam-panahy mahazo anao eto amin'ny pejy io, azo antoka ve izany?
Miala tsiny fa tena ratsy ny nanoratako, tamin'ity keyboard vaovao ity dia tsy haiko ny manoratra ahahaha
Salama Francisco, fanontaniana iray, eo anelanelan'ny ity sy ny Lenovo p70, iza amin'ireo no heverinao ho tsara kokoa? Misaotra anao!
Nividy terminal roa tamin'ny tranokala fanamarihana lenovo k3 samihafa aho. Tena diso fanantenana aho. Ny feo ratsy, tsy haingana araka ny nolazain'izy ireo, dia mirakitra feo ratsy raha oharina amin'ny samsung. Optika ratsy, aberration optika betsaka amin'ny sisiny. Tsara ny efijery. Kitendry ok. Indraindray rehefa miantso aho dia miantso irery
Ny ratsy indrindra ary ity dia matotra. Io faritra io dia navitrika teo amin'ny efijery ary isaky ny indroa io faritra io dia novonoina. Indraindray tsy afaka manoratra aho na inona na inona. Izany dia mitranga amiko ao amin'ny naoty K3.
Ary koa dokam-barotra manelingelina be dia be. Mahagaga.
Inona ny malaza! Nividy ny sela tamin'ny amazona aho, ary ny toetra rehetra ao amin'ny famerenana dia marina sy tena tsara, ny lesoka fotsiny dia rehefa elaela dia nanomboka nipoitra ny dokam-barotra manelingelina, saingy azo vahana amin'ny fametrahana ROMS, izay tena tsara ary manavao anao hatrany 5.1 , manala ny dokam-barotra, mandika ny x feno amin'ny Espaniôla, manatsara ny feo mampino, zavatra iray tapitrisa kokoa. Misaotra ireo naman'ny Movilesdualsim ary manokana an'i Xancin.
Tokony ho 8 volana lasa izay no nividianako ny lenovo k3 note, toa ahy ekipa tena tsara ny marina amin'ny resaka fampisehoana sy tombony raha ampitahaina amin'ny vidiny.
Ny hany zavatra ratsy dia iray volana teo ho eo ilay zavatra nofaritanao tao anaty hevitra dia nitranga tamiko - amin'ny faritra iray amin'ny efijery (lafiny ankavia - ambony) isaky ny manamarika ny tenany izy ary lasa adala ny telefaona finday. ary tsy azo atao ny manoratra tsara na rehefa misy zavatra vakiana dia ity ampahany ity ihany no voafantina ho lasa manelingelina. Rehefa apetrakao ao ambadiky ny efijery ihany koa ny fotsifotsy dia mahita fehiloha mavo ianao .. Tsy haiko na hampiasaina amin'ny fomba ratsy na zavatra hafa toa izany.
Te hahafantatra aho raha afaka mamaha ilay olana amin'ny efijery ianao
Federico Giulio D'Ostuni dia hoy izy:
Ny zavatra iray tsy ananan'ity finday ity dia gyroscope fitaovana izay misy fàfana lehibe toa izany indraindray mametraka azy eo amin'ny sehatr'asa dia ilaina.
Valiny tamin'i Federico Giulio D'Ostuni
Salama Arturo, araka ny filazan'ny namana Wiston, mitadiava fampahalalana amin'ny mobiledualsim ary ovao ny rom dia ho hitanao fa hiasa tsara izy io ary hanjavona ny fanaovana dokambarotra rehetra, natao ho an'i Chine ity finday ity, tsy maintsy havaozinao izany.
Azafady, nividy ny lenovo k3 aho, ekena any Arzantina ve ny hatetika?
Tsy afaka mampiasa azy aho
Salama Francisco, tiako ho fantatra ny fomba fanovana ireo Widgets an'ny night eye pro. gazety nitarina, pikantsary ... Te hanana ilay feo sy hovitrovitra misaraka toa anao aho. fiarahabana
Azafady, valio aho amin'ity fidirana ity, izay nametrahako ny mailaka nataoko mba hahitako ny valinteninao. MISAOTRA
Te hahafantatra aho raha misy Rom vaovao ity finday ity, ary ny fomba fiasany tsy manova na inona na inona, satria ny finday farany ividianako UmiX2 dia manandrana manova azy, ary biriky izao, ary tsy te-hanipy aho esory indray ny vola
Salama indray, tiako ho fantatra ny hevitrao momba an'ity olana ity: raha ny fahitako azy ny laharana miandry ireo finday sinoa rehetra ireo dia ny fametrahana ny Rom araka ny firenena izay hamidy. Heveriko fa izany dia midika asa bebe kokoa ho azy ireo, fa raha afaka daholo ny marika amidy any Espana dia maninona raha ny Sinoa. Raha tsy hoe amidin'izy ireo ho an'ny kontinanta tsirairay io, fa tsy izany. Fa maninona aho no mila telefaona manana ny toetran'ny telefaona finday be raha tsy mitondra tena toy izany eto Espana?
koke dia hoy izy:
Salama, te hilaza aminao momba ny olako tato ho ato miaraka amin'ny Lenovo aho ary izany dia rehefa mandefa WhatsApp amiko ohatra izy ireo dia tsy mandeha izany ary tsy misy na inona na inona avy amin'ny WhatsApp miseho mandra-panokafako ny rindranasa ka tsy hitako. zavatra maro maninona no tsy miantso ny telefaoniko ary tiako ho fantatra raha hamaka izany sy hametraka ilay efitrano vaovao no hamaha ny olako
Toy izany koa no mahazo ahy, nahavita namaha azy ve ianao? Raha mahazo ianao dia ampahafantaro ahy.
Jesoa Morgado dia hoy izy:
Mitranga amiko koa izany rehefa manana aho, mahita ny hafa nanoratra azy mivangongo
Valiny tamin'i Jesus Morgado
Oscarin dia hoy izy:
Salama Francisco: Misaotra betsaka tamin'ny fanampianao. Nataoko daholo ny zavatra notoroinao ary izao dia mandeha toy ny manintona ny telefaona !!!!!
Feo, Horonan-tsary, fakan-tsary, Browser, OK ny zava-drehetra. Tena feno fankasitrahana.
(Hijanona ho ahy fotsiny ny fangatahako anao hanoro ahy ahy, karazana programa fiarovana sy fikojakojana hampiasaina.)
Valiny tamin'i Oscarín
Nividy ny Note Lenovo K3 aho, manana olana maro aho….
-Tsy manokatra ny Play Store
-Nataoko tamin'ny teny espaniola ny fiteny ary mitohy miseho amin'ny fiteny anglisy sy sinoa ny fampiharana sy sary masina maro.
-Ny kaonty Sony teo aloha nananako dia mbola mifandray.
- Niezaka ny nametraka ilay whassap tamin'ny alàlan'ny google play aho ary nilaza fa napetraka izy io, ary tsy apetraka amin'ny Lenovo.
Tsy haiko raha manazava ny tenako aho, hitanareo fa feno ny tsy fahalalako momba an'io lohahevitra io.
Francisco, azonao atao va ny mampita ahy ilay rom izay entin'ity terminal factory ity, ilay iray misy fiteny maro?
Lola sancho dia hoy izy:
Aiza no ahafahako mividy azy amin'io vidiny io?
Valiny tamin'i Lola Sancho
daestcode dia hoy izy:
Salama ramon, manana ny fanontaniako ihany aho fa nahazo info ianao
Mamaly an'i daestdigo
Nividy ireo T3 ihany aho tamin'ny farany satria tsy manana tahiry intsony ilay iray hafa.
Valiny tamin'i Ramon
Jaklyn Bermúdez Guzman dia hoy izy:
Andro tsara. Manana fanamarihana lenovo k3 aho ary salama tsara nefa tokony ho 3 volana dia nanomboka niadana. Tsy haiko raha ilay RAM. Indraindray koa rehefa manoratra aho dia tsy te hiasa ary tsy misy azo kitihina. Tsy haiko na hanavao azy io amin'ny marshmallow satria efa nahazo fanambarana fanavaozana aho. Ny bateria koa somary tsy maharitra fa ary tsikaritro fa mampihena ny bateria ny fb. Fa na izany aza. Misy hevitra momba ny fanavaozana?
Valiny tamin'i Jaklyn Bermúdez Guzmán
Ny zavatra mitovy amiko dia mitranga amiko ary apetrako ny safidin'ny mpamorona izay manome ny safidy hanehoana ny tondro alefanao ary indraindray izy ireo dia mivoaka ho marika fanondro telo fotsiny ary tsy mandeha ary manoratra amin'i wassap fatla indraindray
Hoka, manana fandrakofana 4G avy amin'ny vodafone amin'ity finday ity ve ianao?
Placeholder sary Moral Lopez placeholder image dia hoy izy:
Salama Francisco, inona ny mahasamihafa ny K50 T3S sy ny K50 T5 satria ny vidiny dia 30 € eo ho eo
Valiny tamin'i Manuel Moral Lopez
Salama Francisco. Azonao atao ny mandefa rohy ahafahanao misintona na mijery ny boky torolalana momba ny naoty K3 Lenovo na, raha tsy izany dia ny K50-t5 / K50-a40 ... satria ilay novidiko tamin'ny Internet dia avy amin'ny sinoa?
Misaotra tamin'ny fandraisana anjara ara-teknikao.
Junior leon dia hoy izy:
Salama Francisco, tiako ho fantatra raha mitovy ny k3ts sy ny k50 raha toa ka mitovy ny processeur na misy ny fiovana amin'ny lenovo k50ts na k3ts 🙁
Valiny tamin'i Junior Leon
Salama. Ao amin'ny Lenovo K3 misy olana amiko amin'ny whatsapp, tsy manoratra ny feo izany (tonga eo amin'ny efijery aho fa tsy azo alamina ny mpitam-boky amin'izao fotoana izao)
Valiny tamin'i Karina
Misy mahay manamboatra azy ve? Efa nesoriko izy io ary napetako indray ary dia mijanona ho toy izany ihany.
Salama Francisco, tiako ho fantatra raha mitovy ny k3ts sy ny k50 raha toa ka mitovy ny processeur na misy ny fiovana amin'ny elanelana k50ts lenovo na k3ts eo amin'ny K50 T3S sy ny K50 T5 satria tsy mitovy amin'ny Colombia ny vidiny.
sergiocuenca dia hoy izy:
Salama tsara, faly be aho amin'ny fanamarihan'i lenovo k3 indrindra rehefa avy namaka izany aho saingy manana olana kely aho ary tsy avelan'ny micro handany azy amin'ny sarintany google na amin'ny fampiharana hafa, amin'ny whattsap ihany, afaka manampy ahy ianao ? MISAOTRA
Mamaly an'i sergiocuenca
Nijery fampitahana mahaliana ao amin'ny YouTube momba ny fenitry ny Wifi aho ary aleoko ny Bluboo Xtouch amin'io lafiny io.
Afaka hitanao ao amin'ny YouTube izany amin'ny "hafainganam-pandehan'ny wifi standars wifi"
tsangambato dia hoy izy:
Tsara ny tolakandro, hitako tamin'ny fanehoan-kevitra teo aloha fa misy tutorial na torolàlana momba ny famahana ny olan'ny fiteny amin'ity terminal ity. Azonao lazaina amiko ve hoe aiza no ahitako an'ity vaovao ity? Vao avy nividy ity fitaovana ity aho ary tena tsy mahazo aina amiko raha manana fiteny telo miaraka, indrindra ny sinoa, izay tsy azoko xD. Misaotra mialoha.
Valiny tamin'i Estela
electronicsjc dia hoy izy:
Faly be amin'ny Lenovo k3 Note. Tiako ny hafainganan'ny, fluidity, manana fakan-tsary 13 MP tena tsara miaraka amin'ny flash LED, fakan-tsary faran'izay tsara ary tsara tarehy ny endriny. Tena mahazo aina izy satria mihena ny lanjany amin'ny efijery 5,5-inch lehibe. Faly aho!
Valiny amin'ny electronicosjc
Maleja lozano dia hoy izy:
Ny lenonovo k3 note-ko tsy mandeha tsara, tsy mandeha tsara ny fakan-tsary, maka sary manjelanjelatra ary mandeha ny sasany, sendra azy ny sasany ... Azafady ampio aho, maninona no mety hisy izany?
Mamaly an'i Maleja lozano
Shit madio! Mila ROM Sinoa miaraka amin'ny App Chinese ary mahafaty ny fikasihana. Tsy miorim-paka akory aho ary niantso an'i Lenovo ary satria tsy amidiny eto izy ireo dia tsy handray an-tanana. 0 Total ary tsy hividy Lenovo intsony aho. Mpanendaka!
marco ramirez (@ marco24816) dia hoy izy:
Androany dia nahazo ny findaiko aho, nividy azy tamin'ny alàlan'ny AliExpress, tokony ampiako fa gaga aho fa tsy mitondra fampiharana sinoa izany, ny OS dia Android 5.0, izany hoe Android madio. Ny marina dia afa-po aho amin'ny fividianako.
Mamaly an'i marco ramirez (@ marco24816)
Raha misy afaka manova ny fiteny amin'ny Espaniôla dia aeleo izy. Misaotra anao
Nividy K3 roa aho ary ny tsy vitantsika dia ny miantso sy memo feo avy amin'ny watsap. Azonao lazaina amiko ve izay azoko atao?
Jose Sepúlveda dia hoy izy:
Tena faly aho !! Nividy azy io ho an'ny linio aho, iray volana lasa izay, ary tena nihatsara tokoa izy ireo, ohatra, milaza amin'ireo liana aho:
-Tsy misy junk apps
-Ny romana ofisialy amin'ny teny espaniola
Valiny tamin'i José Sepúlveda
Neffy lozano dia hoy izy:
Salama, manao ahoana ianao, manana 1 taona sy volana eo ho eo aho .. miaraka amin'ny fanamarihana lenovo k3.
Ankehitriny dia miadana moramora izy io, manafana ary mivoaka tsy ho ela ... Nanova charger sy bateria aho ary tsy miova ... inona izany ??
Valiny tamin'i Neffy Lozano
Ny Nexus 5 dia tsy mitovy amin'ny AnTuTu
Nokia dia mitady mpanamboatra laza malaza sy malaza manerantany amin'ny fiverenany